Indlela yokusebenzisa ukongezwa
I-Malware kunye ne-checker.
Esi sixhobo sokukhusela esakhelwe ukuchonga iiwebhsayithi ezingaphephile kwiwebhu kwaye yazise abasebenzisi bokulimala. Sithemba ukukhuthaza inkqubela phambili kwiwebhu ekhuselekileyo nekhuselekileyo.
Ezi zizabhsayithi ziqulethe ikhowudi efaka iprogram enobungozi kwiikhompyutye zabatyeleli, nokuba ngaba umsebenzisi ucinga ukuba bayalanda isofthiwe esisemthethweni okanye ngaphandle kolwazi lomsebenzisi. Hackers ke ungasebenzisa le software ukuba ibambe kwaye ithumele abasebenzisi ulwazi oluyimfihlo okanye olubucayi. Ubuchwephesha bethu boKhuseleko oluKhuselekileyo luhlola kwakhona kwaye luhlalutye lewebhu ukufumanisa iiwebhusayithi ezinokuthi zonakalise.
Ezi website zizenza ngathi zivumelekile ukuze zikhohlise abasebenzisi ukuthayipha kumagama abo abasebenzisi kunye namaphasiwedi okanye ukwabelana ngolwazi olwangasese. Amaphepha eWebhu afana neewebhsayithi ezisemthethweni zebhanki okanye izitolo ze-intanethi ziyimimiselo eqhelekileyo yeendawo zokuphanga.
Indlela esichaza ngayo i-malware
I-malware yekota iquka uluhlu lweprogram enobungozi eyenzelwe ukulimaza. Iziza ezichaphazelekayo zifaka i-malware kumatshini womsebenzisi ukutshintsha ulwazi oluyimfihlo okanye ukulawula umshini womsebenzisi nokuhlasela ezinye iikhomputha. Ngamanye amaxesha abasebenzisi bakhuphela le malware ngenxa yokuba bacinga ukuba bafake isofthiwe ekhuselekileyo kwaye abazi ukuba ziphatha kakubi. Amanye amaxesha, i-malware ikhutshwe ngaphandle kolwazi. Iindidi eziqhelekileyo ze-malware ziquka i-ransomware, i-spyware, ii-virus, iimbungu kunye namahashe eTrojan.
I-Malware ingafihla kwiindawo ezininzi, kwaye kunokuba nzima nakwiingcali ukuba zibone ukuba i-website yabo isulelekile. Ukufumana iiwebhusayithi ezonakele, sitshekisha iwebhu kwaye sisebenzise oomatshini abachanekileyo ukuhlalutya amasayithi apho sifumene iimpawu ezibonisa ukuba isayithi senzeke.
Lawa mawebhsayithi abahlaseli baye bamisa ukuze bawongele ngamabomu kwaye basasaze iprogram enobungozi. Ezi ndawo zixhaphaza ngokukhawuleza isiphequluli okanye ziqukethe isofthiwe engonakalisayo edla ngokubonisa ukuziphatha okubi. I-teknoloji yethu iyakwazi ukufumana ezi ziphatha ukubeka phakathi kwezi ziza njengamasayithi okuhlaselwa.
Lezi zizaziso ezisemthethweni eziye zahlanjelwa ukubandakanya umxholo ovela kuzo, okanye ukuqondisa abasebenzisi, iziza ezingasebenzisa iziphequluli zazo. Ngokomzekelo, iphepha le-site lingahle lenziwe lugqithise ukufaka ikhowudi ebuyisela umsebenzisi kwisiza sokuhlaselwa.